कतारविरुद्ध नेपालको प्लेइङ ११ मा को–कोले पाउलान् मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
कतारविरुद्ध नेपालको प्लेइङ ११ मा को–कोले पाउलान् मौका?
काठमाडौं, साउन ६ । सिंगापुरमा आजदेखि सुरु भएको आइसीसी टी–२० विश्वकप एसिया फाइनल छनोट अन्तर्गत भोलि नेपालले पहिलो पहिलो खेल खेल्दै छ । नेपालले पहिलो खेल कतारसँग खेल्न लागेकाे हाे ।
नेपाल–कतारबीचको खेल नेपाली समयअनुसार बिहान ७ः१५ बजेदेखि सुरु हुनेछ । एसिया फाइनल खेल्ने पाँच राष्ट्रमध्ये नेपाल एक मात्र एकदिवसीय मान्यता प्राप्त पाएको टिम भएकाले उपाधि जित्ने बलियो सम्भावना छ । आईसीसी वरियतामा नेपाल ११ औं र कतार २१ औं स्थानमा छ ।
यो प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि नेपालले मलेसियाविरुद्ध सिरिज जितेको थियो । उक्त सिरिजको तेस्रो खेलमा खेलाएको प्लेइङ सेट नै कतारविरुद्ध उत्रिन सक्छ । यद्यपि सिंगापुरको पिच तथा वातावरणले प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले प्लेइङ ११ मा परिर्वतन पनि हुनसक्ने सम्भावना छ ।
नेपालको सम्भावित प्लेइङ–११ः पारस खड्का (कप्तान), विनोद भण्डारी (विकेटकीपर), ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, सोमपाल कामी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, राेहितकुमार पाैडेल, सन्दीप लामिछाने, पवन सरार्फ, अभिनाष बोहरा र करण केसी ।
सिंगापुर र मलेसियाको विजयी शुरुवात
सिंगापुरमा आजदेखि सुरु भएको आइसीसी टी–२० विश्वकप एसिया फाइनल छनोट २०१९ को दोस्रो खेलमा मलेसिया विजयी भएको छ । कुवेतलाई ४२ रनले हराउँदै मलेसिया विजयी भएको हो । मलेसियाले दिएको १६२ रनको लक्ष्य पाएको कुवेतले १८ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १२० रन मात्र बनाउन सक्यो ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप छनोटः सिंगापुरविरुद्ध केन्याको शानदार जित
उसका लागि कप्तान मुहम्मद कशिफले ५१, उश्मान वाहीदले १६, आदन इदरिसले १२ रन बनाउनु बोहेक अन्यले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् । बलिङमा मलेसियाका मुहम्मद सयादतले ३, फित्री शाम, पवनदीप सिंह र सायद अजिजले २–२ विकेट लिए । यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित २० ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १६२ रन बनायो ।
उसका लागि शाफिक शरिफले ३८, अमिनुद्दिन रम्लीले ३३, सायद अजिजाले ३८, कप्तान अहमद फैजले १५ रन बनाउनुबाहेक अन्यले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् । बलिङमा कुवेतका मोहम्मद हसनले २, मुहम्मद कशिफ, लायस अहमद, सिराज खान र महोम्मद अश्लामले एकएक विकेट लिए ।
आजै भएको पहिलो खेलमा सिंगापुर विजयी भएको छ । कतारलाई ३४ रनले हराउँदै पहिलो खेलमा सिंगापुर विजयी भएको हो । सिंगापुरले दिएको १८७ रनको लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङमा आएको कतारले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १५३ रन बनायो ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप छनोटः पपुवा न्यूगिनीले नेदरल्याण्ड्सलाई हरायो
उसका लागि मोहम्मद रिजलनले अविजित ३३, कप्तान तमूर सजादले ३८, मोहम्मद तनबीरले २६, फैसल जाभिदले २९ र इनमउल हकले ११ रन बनाउनुबोहक अन्यले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् । बलिङमा सिंगापुरका जनक प्रकाश, अम्जाद महबुबले ३–३, सेलादोरे विजयकुमार, चेतन शूर्यवंशी र विनोथ भास्करले एकएक विकेट लिए ।
यसअघि घरेलु मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १८६ रन बनायो । उसका लागि सुरेन्द्रन चन्द्रमोहनले ४७, टिम डभिडले ३८, मनप्रीत सिंहले ३४, रोहन रंगर्जानले ३२, अनिस प्रणामले १० रन बनाए । बलिङमा कतारका इकबाल हुसैनले ४, नुवाव सरवारले २ र तमूर सजादले एक विकेट लिए ।
नेपाल फाइनलको शीर्षमा पुगे विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाउने छ । ग्लोबल छनोट ११ अक्टोबरदेखि ३ नोभेम्बरसम्म यूएईमा हुँदैछ । यूएई भने आयोजकको रुपमा स्वतः ग्लोबल छनोटमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
याे पनि पढ्नुस टी–२० विश्वकप छनोटः टेष्ट राष्ट्र आयरल्याण्डविरुद्ध क्यानडाको रोमाञ्चक जित
ट्याग्स: कतार भर्सेस नेपाल, टी–२० विश्वकप छनोट